I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Rebecca
Ngo-131 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Itholakala kumamayela ayi-10 ukusuka edolobheni laseMorgantown kanye nenkundla yezemidlalo. I-Cooper's Rock iqhele ngamamayela angu-12, ngokuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili lezintaba nokuqwala amatshe. Leli kotishi elithokomele elinezinsiza zesimanje lingahlalisa abantu abangu-4 abanombhede oyindlovukazi ongu-1 kanye nosofa wendlovukazi wokudonsa.
I-Trillium Acres Guest House iwuhambo olufushane emahlathini angomakhelwane, yamaqembu amakhulu adinga indawo yokuhlala eyengeziwe.
I-Trillium Acres cottage iyindawo encane kodwa efudumele yokumema. Umqondo ovulekile, igumbi lokuphumula nekhishi liyakwamukela njengoba ungena endlini. Ihlukaniswe ngokwengxenye nendawo yokuhlala eyinhloko yikamelo lokulala, elinomnyango wengilazi oshelelayo ophumela evulandini elincane.
Igumbi lokugezela nelondolo azikho ekamelweni.
Umpheme obanzi ombozwe ngaphambili kanye novulandi omncane wangemuva ukhuthaza umuntu ukuthi aphumele ngaphandle futhi ajabulele imvelo. Ikakhulukazi ezungezwe izinkuni kunezindlu ezingomakhelwane eziseduze, azibonakali kahle ehlobo ngenxa yamahlamvu.
Kukhona enye indlu etholakala endaweni eyabelana ngomgwaqo. Ikotishi linendawo yalo yokupaka.
Izilwane ezifuywayo zamukelekile! Siyacela ukuthi izinja ziboshwe uma zingaphandle futhi sikujabulele ukwaziswa ukuthi uletha izilwane ezifuywayo. Kukhona izinkukhu zamahhala ezizungezile futhi ngezinye izikhathi siba namakati ethu aboshwe ngaphandle.
I-wifi esheshayo – 131 Mbps
Kukhona omakhelwane abaningana eduze, kodwa abaningi ababonakali kahle ehlobo lapho zonke izihlahla zigcwele amahlamvu. Ngaphesheya komgwaqo kune-Snake Hill Wilderness Management Area, enemizila yezintaba kanye nokuqwala amatshe uma unemishini yakho. Futhi kuhle kakhulu ukushushuluza eqhweni ebusika.
Itholakala eduze kwe-Trillium Acres Guest House.